Oge opupu ihe ubi na matraasi na ọnụ ahịa ahịa | Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwaahịa Ahịa Zamboo Ebe nchekwa Foamprice-rayson
Nnwale nnwale dị elu na sistemụ nkwalite zuru oke na-egosi na 'arụmọrụ dị elu' ahụ.
Mepụta afọ gara aga, Rayson bụ onye na-emepụta ọkachamara na kwa onye na-eweta ike siri ike na mmepụta, chepụta ya, na R & D. Walmart igbe na matride Raysson nwere otu ndị ọkachamara ọrụ ndị ahịa na-aza ajụjụ site na ntanetị ma ọ bụ ekwentị, na-ejikwa ndị ahịa na-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ọ bụla. Ma ị ga - achọ inweta ozi ndị ọzọ, kedu ihe anyị ga - eme, nwalee ngwaahịa ọhụrụ anyị - Warmart igbe, ọ ga - amasị m ịnụ ihe dị iche iche ụdị ule. Ha na-agba mbọ na-achasi ike, ụzọ isi ike nke ihe na-emerụ ahụ na-anwale, wdg.
Ruo ugbu a, Rayson gafere asambodo usoro nchịkwa mba ụwa. Ngwa ahịa niile gụnyere ngwaahịa ọhụrụ anyị na-eweta na usoro ọhụụ, mma, na ọnụahịa asọmpi.
Ya na usoro mmepụta zuru oke na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, Rayson nwere ike ịhazi, zụlite, na nwalee ngwaahịa niile arụ ọrụ.
Kedụ ka m ga-esi nweta ụfọdụ ihe nlele?
Mgbe ị gosiputara onyinye anyị ma ziga anyị ọnụ ahịa nlele ahụ, anyị ga-emecha ihe nlele n'ime 15 ~ 20. Nwere ike ịjụ ụlọ ọrụ Express ka ọ bulie ihe nlele ahụ na ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ ịnwere ike izitere anyị DHL, FedEx ma ọ bụ Ups na-anakọta gị na akaụntụ gị.